Kutengesa kwemagetsi kunoshanda sei? | ECommerce nhau
Iyo kutenga zvigadzirwa pamhepo, izvo zvinowedzerawo kusahadzika uye kuda kuziva nezvekuti iyo zvemagetsi kwema. Vazhinji vedu tave kugona kutenga online ne kushandiswa kwemakadhi emagetsi emagetsi, iyo yatinofanira kunyoresa pamapeji e-commerce kana tichida kuita chero mhando yekutenga, tobva tatsanangura mashandiro eiyi ese maitiro ekutenga uye matanho ekuchengetedza anotorwa mune izvi.
1 Matanho ekutenga paInternet
2 Chii chinoitika kuseri kwekutengesa?
3 Maitiro ekuziva kana kutengesa kwemagetsi kwakachengeteka
4 Kutengesa kweInternet kunogona kudzimiswa?
Matanho ekutenga paInternet
Kutenga pamhepo nhasi kwave ikozvino neramangwana. Iyo e-commerce boom ichokwadi, ndosaka uchiziva kukosha kwekutengesa kwemagetsi basa. Kune vese mutengesi uye mutengi.
Asi, Ndeipi nzira yekutenga pamhepo? Tinokutsanangurira iwe:
Mushandisi anouya kune eCommerce nekuti ari kutsvaga chaicho chigadzirwa. Kuti uite izvi, enda kune iro chairo peji, kana shandisa online chitoro chekutsvaga injini kuti uwane icho.
Kamwe paanenge ainayo, mushandisi haana kusiiwa ari oga naye; Zvinogoneka kuti iwe utsvage icho chakafanana chigadzirwa mune zvimwe zvitoro uye woongorora kwachinokubhadharisa zvakanyanya. Izvi zvinoenderana nemari yekutumira, mutengo wechigadzirwa, kuwanikwa, kubhadhara uye nzira dzekutumira, uye nguva yekutumira.
Mushure mekufunga kuitenga, uchaenderera mberi nekuona nzira yekubhadhara asi kutanga uchave nechokwadi chekuti chitoro chinokupa chivimbo, ndiko kuti, iwe haufunge kuti i "chitsotsi", "chitsotsi" kana icho ucharasikirwa nemari yako. Iyi ndeimwe yenhanho dzakakosha mukutengesa zvemagetsi kubvira, kana munhu ari kuzotenga akafunga kuti haufanirwe kuvimbwa, kana kuti iwe usavape dziviriro yakakwana, vanogona kupedzisira vasisaenderere mberi (mu chokwadi, kune yakakwira muzana yevashandisi vanogadzira ngoro pamhepo asi havaenderere mberi kupfuura nzira yekubhadhara, kungave nekuti havavimbe, nekuti mutengo wekupedzisira unodhura kupfuura mune mamwe masayiti kana nekuti vanozvidemba).
Kana ivo vakaenderera kumberi, saka kutengeserana kunoitwa online (kazhinji nekadhi rebhangi, asi mamwe masisitimu ekubhadhara anoshandiswa zvakare sePaypal, kuchinjisa, mari pakutakura ...) uye kutengesa kwapera. Ehe, hazvizovharwe kusvikira mutengi agamuchira odha yavo uye vopedza mazuva mashoma kuti vaone kana vachidzorera kana kwete.
Chii chinoitika kuseri kwekutengesa?
Pakutanga kuona, zvinoitika ndezvekuti isu tinopinda e-kutenga webhusaiti, Isu tinosarudza zvigadzirwa zvatiri kuda kutenga, tinoshamwaridzana nengoro yekutengera uye pakupedzisira tinosarudza sarudzo yekutenga, tobva tapinda yedu data rako pachako uye iro rekadhi redu.
Mune mamwe mazwi akaomarara; mushandisi anopinda mu kutenga server uye Yakachengeteka Internet SSL Kubatana kunosimbiswa. Shure kwaizvozvo, ruzivo rwunotorwa kuenda kunzira yekubhadhara. Zvese izvi zvinopinda nenzira yekubhadhara, kadhi rinoshandiswa kutenga iro rinosanganisirwa uye Bhangi rasvikwa, rinoongorora ruzivo ruchifunga misiyano yakawanda kuti isarudze kana iko kutengeserana kuri pamutemo.
For the kuongorora kwekutengesa kumwe kuongorora kunoitwa kunoenderana nema smart algorithms ayo anoongorora maitiro evatengi. Semuenzaniso: nzvimbo dzaunotenga zvakanyanya, nyika yekugara, nezvimwe.
Zvese zvakatengwa zvakagadzirwa zvemagetsi kuburikidza nenzira dzakasiyana, izvi zvinoenderana neserura yauri uye nenzira yaunotenga nayo. Kana iwe uri wekutanga mu shopping onlineRangarira kuti kune zvimwewo zvinhu zvakakosha zvikuru sekuchengetedzwa kwekadhi rako, raunofanira kufunga nezvaro usati waita kutenga kwako kwekutanga pamhepo.
Maitiro ekuziva kana kutengesa kwemagetsi kwakachengeteka
Paunenge uchitenga online, kunze kwekunge iwe uine yakawanda ruzivo, yekutanga danho inodhura. Chikonzero nei kutengesa kwemagetsi, kwechinguva ikozvino, kwaive kushoma uye vanhu vakatarisa zvakanaka pane zvavaifanira kutenga kuti vatore nhanho iyoyo.
Uye ndizvozvo, icho chokwadi isa data rako rega, upe kadhi rako nhamba, kana chimwe chinhu chinobatana nekwaunogara kana bhangi rako, inoita kuti utye, kunyanya kana chitoro chepamhepo chisiri chako chivimbo.
Naizvozvo, kana uchigadzira zvekutengesa zvemagetsi, zvakakosha kuti utarise zvinhu zvinoverengeka zvinoita kuti vatengi vanzwe vakachengeteka. Zvinhu zvipi?
Edza kuburitsa pachena yako data. Fungidzira kuti unoenda kune peji rewebhu kwavanoisa zvigadzirwa zvakachipa kwazvo. Nekudaro, iwe hauzive kwavanozovatuma, kana vari kuSpain, kana paine munhu kana kambani kumashure kwavo. Iko hakuna zvakare nzira yekubata navo (hapana email, hapana foni). Ungavimba here kupa yako data kunyangwe yaive yakachipa sei? Zvichida kwete. Zvakanaka, ndizvo zvaunofanira kufunga kuti upe pachena kune vatengi vako.
Gonesa dzakasiyana nzira dzekubhadhara. Vanhu vazhinji vanozeza kutenga pamhepo kuburikidza nekadhi rekubhangi. Nekudaro, kuendesa, kugamuchira mari pakuendesa kana nePaypal kunogamuchirwa. Kana iwe ukapa nzira dzinoverengeka dzekubhadhara, uye usingogumira kune imwe chete, zvichavaita kuti vawedzere kuvimba kuti kutengesa kwemagetsi kwakachengeteka. Uye usafunge kuti nekuti nzira yekubhadhara inodhura havazoibvume; dzimwe nguva, kuyedza, vanoshandisa nzira inodhura kuve nechokwadi, uyezve vanogona kuenda kune akapusa uye akasununguka.
Simbisa kuchengetedzeka muchitoro chako chepamhepo. Izvi zvakakosha kwazvo, nekuti iwe unoda, nemutemo, kuona kuti yako eCommerce kubhadhara kwakachengetedzwa uye kwakachengeteka. Unowana sei izvozvo? Zvakanaka, zvinoenderana nesisitimu yawakavakira chitoro, mubhangi rako, nezvimwe. Chinhu chakanakisa kuzvizivisa iwe kuti uzive kuti ndeapi mirau yaunoteedzera uye kuti ungazviite sei, kunyanya kudzivirira faindi dzinogona kuwira pamusoro pako.
Ramba uchizivisa mutengi nezvese matanho anotorwa. Kazhinji kuraira kunogamuchirwa mumaawa 24-48, asi zvakakosha kuti iratidzwe kuitira kuti izivikanwe kuti ndedzipi nyika dzainopfuura napo.
Kutengesa kweInternet kunogona kudzimiswa?
Fungidzira kuti uchangobva kutenga chimwe chinhu uye mushure memaminitsi mashanu, kana kumberi, watozvidemba nekutenga. Kuikanzura kunoenderana nechitoro kwawakagadzira, asi kazhinji hazvisi nyore sezvingave zviri nyaya yekuenda kuchitoro chaicho uye kudzorera chawakatenga.
Uye ndizvo izvozvo kune zvitoro zvepamhepo apo zviri nyore kudzima zvese, senge Amazon, uko nekutaura kuti wakazvitenga nekukanganisa, mune nhanho yematanho maviri, iwe wagadzirisa. Asi ko zvakasara zveCommerce?
Kurudziro yedu inotevera:
Bata bhangi rako. Kana iwe uine mukana wekupinda kuburikidza neInternet, zviite uye bvisa mutengesi wawakaita. Kana usingakwanise, fonera bhangi rako uye vakumbire kuti vakubatsire kurikanzura.
Nyora kuchitoro. Zvitoro zvepamhepo zvinogona kuita chat, social network, runhare kana email. Unogona kuvabata uye utsanangure dambudziko rakaitika kuti vagokwanisa kukanzura odha yawakaisa. Izvo izvi zvichaita kudzosera mari kubhangi rako.
Mune zvimwe zvitoro iwe zvakare une mukana wekudzima odha iwe pachako, kunyanya pakutanga kwayo, painenge ichiri kugadzirira uye isina kutumwa. Asi kana ukarega uchienda, zvinonyanya kuomera ivo kuti vadzimise.
Izvo zvakakosha kuti iwe uzviite munguva pfupi, nekuti kana iyo odha ikatumirwa, kudzima kwacho kwakanyanya kunetsa kuita, kunyanya nekuti chikamu chemari iyoyo chakatoshandiswa mukutakura. Ipapo iwe waizofanirwa kudzoka uye ivo vaizokutumira iwe mari shoma pane yawakabhadhara (kunze kwemakambani makuru akadai seFnac, Amazon ...).
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Kutengesa kwemagetsi kunoshanda sei?